AI kunyorera kwakakura mune angangoita ese chikamu chingave icho nezveutano, dzidzo, bhizinesi, mari, mutemo kana kugadzira. Muchikamu chekuchengetedza hutano, mafemu ari kushandisa machine learning kugadzira nekukurumidza uye zvirinani kuongororwa kupfuura vanhu. Sa IBM Watson, ndiwo muenzaniso unonyanya kuzivikanwa weAI mubazi rezvehutano, unonzwisisa mutauro wevanhu uye unoshanda pakupindura mibvunzo yakabvunzwa nezvayo. Iyo sisitimu inotsvaga yemurwere dhata mune dhatabhesi kuti iumbe dzidziso iyo iyo iyo ipapo iyo inopa pamberi pevanhu. Kubhejera kukuru kweAI kuri pakuderedza mutengo uye kugadzirisa mhedzisiro yevarwere. Chatbots, mumwe muenzaniso weAI, chirongwa chekombuta chinobatsira vatengi nekupindura mibvunzo yavo, kuvabatsira kuburikidza nehurongwa hwekubhadharisa uye kuvabatsira kuronga yavo yekuteedzera-kugadzwa. Muchikamu chedzidzo, AI inogona kutsiva vadzidzisi, nekuchinja zvachose nzira dzinodzidziswa nevadzidzi, kuvabatsira kudzidza nekunzwisisa panguva yavo yega. Otomatiki grading uye mhedzisiro mhedzisiro inzvimbo shoma apo AI yaizonyatso batsira.